Faahfaahino Dheeraad Oo Ka Soo Baxaya Qarax Lala Eegtay Kolonyo Ka Tirsan Ciidamada Danab – Goobjoog News
warar dheeeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax khaasor geeystay oo saacado ka hor deeganka Tiixsiile oo u dhaw degmada walanweyn lagula eegtay Kolonyo ay la socdeen Ciidamada Sida gaarka ah u Tababaran ee Danab uu hoominayay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose.
Wararka inaga so gaarayo goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa shegaya in illaa Tiro Afar askari ah ay ku dhinteen qaraxa oo ahaa gaari lagu dhuftay kolonyada ciidaamada Danab, iyadoo qaraxa kadib uu dagaal uu goobta uu ku dhaxmaray Ciidamada iyo koox ka tirsan Al-shababki weerarka soo qaaday .
Wararka ayaa sidoo kale sheegay in Saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada DANAB ay ku dhaawacmeen Qaraxa, kuwaasoo ay ku jiraan taliyaha Ciidanka Jen Beer-Yare iyo taliyaha guutada 6aad ee Ciidanka xoogga dalka.
Saraakiisha dhaawacmay waxaa sidoo kale ku jiro taliyaha ciidamada Danab, Gaashaanle Axmed Cabdullahi Nuur Beer Yare , kaas oo uu soo gaaray dhaawac fudud.
Sikastaba Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka Shabeelaha Hoose oo ku aadan qaraxaasi.